1 SAMOELA 1. 1-28	F. 1, 2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 SAMOELA 1. 1-28	F. 1, 2
Ratsy ny fampirafesana. Na dia mpivavaka aza i Elkana dia tsy nandeha araka ny sitrapon’Andriamanitra noho ny fananana vady roa dia i Hana sy Penina. Mety fomban-tany tamin’ny andron’i Elkana ny fampirafesana kanefa dia niteraka voka-dratsy satria tsy mitovy ny fitiavana azy roa. Niteraka fifanenjehana izany, fifampialonana, ratram-po (6), samy manao izay hamelezana ny iray. Soa fa tonga Jeso nanitsy izany fomba fanao izany ! (Titosy 1.6)
Vavak’i Hana. Feno alahelo Hana satria nahatsiaro tena ho irery toa tsy misy ilàna azy hany heriny nitondra izany teo amin’Andriamanitra (10). Vavaka manambara mazava izay tadiaviny dia ny hanan-janaka(11) ary naharitra nitalaho ny amin’izany izy (12) ka tsy nanome lanja izay mety ho fijery sy fitsaran’ny olona azy (14). Nihaino vavaka Andriamanitra ka nitoe-jaza Hana.(20).
Teraka i Samoela. Nivoady ary Hana fa hatokany ho an’Andriamanira io zanaka nangatahany tamin’Andriamanitra io izay nomeny anarana hoe Samoela. Ny fotoana ninonoan’ny zanany taminy ihany no nihazonany azy fa dia nefainy ny voadiny. Azo an-tsaina fa tsy mora ny hahafoy zanaka tiana sy nirina, kanefa dia niray fo tamin’ny vadiny Elkana ka tsy naneho fanoherana tamin’izany fanapahan- kevitra izany. Olom-bavaka i Hana ka nambarany tao anatin’ny vavaka koa ny fanolorana ny zanany. (28)
Saintsaino : Ny fo torotoro sy mangorakoraka tsy mba ataon’Andriamanitra tsinontsinona » (Salamo 51.17).